गायिका विष्णु माझीको गुमनामपन र गायिका ब्रिटिनी स्पीयर्सको दुखान्त
Updated: Exclusive: उता नेपालकी बहुचर्चित लोकगायिका ३५ वर्षीय विष्णु माझी विगत १६ वर्षदेखि शारीरिकरूपमा गुमनाम छिन् र उनको एउटा मात्र सार्वजनिक फोटो (जो यो समाचारमा पनि प्रकासित छ) जुन उनका सबै गीति एल्वम र प्रचार सामाग्रीहरूमा देखिने गरेकोछ। गायिका माझीलाई उनका श्रीमान भनिने सुन्दरमणि अधिकारीले एउटा फोटोमा सिमित पारेर उनको सुमधुर स्वर बाहेक सबै कुरा गुमनाम बनाएका छन्। गायिका माझीलाई सुन्दरमणिले बिहेको नाउमा बन्धक जस्तो बनाएर यौन र आर्थिक शोषण बनाएका हुन् कि? सर्बत्र चाँसोको विषय बनेकोछ। यता, अमेरिकी पपगीतकी लोकप्रिय गायिका ३९ वर्षीय ब्रिटिनी स्पीयर्स विगत ११ वर्षदेखि आफ्नै दुर्व्यसनीको खराब लतले गर्दा आफ्नै बाबा र वकिलको अभिभावकत्व र सुपरिवेक्षण (Conservatorship) मा जीवन अगाडि बढाउनु परेकोछ भने उनका दुई छोराहरू पनि पूर्व पतिको ७० प्रतिशत हेरचाह अधिकार (custody) मा छन्। यि दुई फरक मुलुकका दुई बहुचर्चित गायिकाहरू जसको जीवनमा जतिनै बहुचर्चा, नाम, धनदौलत, ऐश, आराम कमाए पनि अत्यन्त एकांकी, अभागी जीवन जिउन विवस दु:खी पात्र बनेकाछन्। मानवले जिउने सामान्य र स्वतन्त्र जीवन यिनीहरूले जिउन सकेकाछैनन् । तर यिनका समर्थक फ्यानहरूले #FreeBritney र #FreeBishnuMajhi भनेर आवाज उठाउँदै आएका छन्। चुरोको कुरो के हो? सविस्तार तलको समाचारमा पढ्नुहोस्:
विष्णु माझीको गुमनामपन
उता, लोकगायिका विष्णु माझी नेपालको स्यांजा जिल्लाको चापाकोटमा सन् १९८६ मा जन्मिएकी हुन्। यिनले सुन्दरमणि अधिकारी नाम गरेका एक व्यक्तिसंग सन् २०१३ सालमा बिहे गरेको बताईएकोछ। उनीहरूको दुई जुम्ल्याहा सन्तान पनि छन् भनिन्छ। तर गायिका माझी श्रीमति मात्र हैनन्, यिनी राष्ट्रकी सम्पत्ती र करोडौं जनता स्रोताहरूको गीतसंगीतकी ढुकढुकी हुन्। उनको लोकप्रिय गीतहरूमा डुबेर गाउँघर फर्किने, राष्ट्रलाई माया गर्ने, प्रेयसी र खसमलाई हुरूक्क भै सम्झिने लाखौं करोडौं स्रोताहरू विष्णु माझीको आफ्नो निजी जिन्दगीदेखि बिल्कुलै बेखवर छन्। अब प्रश्न उठ्छ, गायिका माझी आफ्नै राजीखुशीले गुमनाम गुप्तवास वसेकी हुन् त? यस्तो प्रतिभाशाली, सबैको मन जित्ने गायिका आफ्नै आमाबाबु, दाजुभाई, दिदीबहिनी, साथीसंगी र नातेदारहरूसंग सम्पर्कमा नआई बस्न चाहने एकलकाँटे, सन्की र निष्ठुरी हुन् त? सुन्दरमणि अधिकारीले गायिका माझीलाई १५/१६ वर्षको उमेरदेखिनै गायक बनाउने निहूमा पोखरा हुँदै काठमांडू ल्याएको र त्यस यता उनी परिवारबाट सम्पर्कबिहिन रहेको कुरा कति सत्य हो? के सुन्दरमणिले यौन र आर्थिक शोषण गर्ने नियतवस उनलाई गुमनाम बनाएका हुन्? किन गायिका माझीको एउटा मात्र फोटो सार्वजनिक छ अहिलेसम्म ? कुन कुराको डर या चिन्ताले उनको सार्वजनिक जीवन पुरै बन्द गरिएको छ र नियन्त्रणमा लिईएको छ? यसको उत्तर खोजिनु पर्छ। गायिका माझीलाई यौनदासी र आर्थिक शोषणमा राखिएको हुन सक्छ। गायिका माझीलाई ब्रेन वास गरिएको हुन सक्छ।
संसारमा सेक्स र पैसाको लागि जताजतै नारीलाई यौनदासी बनाउने र आर्थिकरूपमा कन्ट्रोल लिने धुर्तहरूको बिगबिगी छ।अपबाद बाहेक ब्रेन वास नभई यसरी वर्षौं गुप्तवास बस्ने कुरै आउँदैन।सुन्दरमणि अधिकारी मेनुपुलेटिभ अपराधी हुन् भन्ने कुरा गायिका माझीले गीत गाई रहनु तर गीत गाउन स्टुडियोमा जाँदा पनि घुम्टो/बुर्का ओढेरै जानु, एउटै मात्र फोटो गीतको प्रचारको लागि बितरण गर्नु, गायकीको सम्पूर्ण रकम सुन्दरमणिले डिल गर्नु र संकलन गर्नु आदिले आशंका जन्माउँछ। यि शंकास्पद व्यावहारहरू सामान्य खाले मानव जीवनका दैनिकी हुँदै हैनन्। यस्तो व्यावहार र गतिविधि ‘दाल मे कुछ काला है’ नै हो।
सोंचौं, एउटी १५-१७ वर्षकी बालिका केटीलाई गायिका बनाउने निहूँमा लापत्ता गरी बिहे गर्ने अनि मान्छे मात्र हैन फोटो समेत गायब गर्ने गरी लुकाईएको छ। गायिका माझीको नाममा एउटा गीतको अहिले रू. दुई लाख लिईने गरेको समाचार आएको छ। माझीले ५,०००+ गीत गाईसकेकीछिन् तर सबै कुरा गौप्य नै राखिएको छ । सार्वजनिक व्यक्तित्व (पब्लिक फिगर) का बारे जनताले सुसुचित हुने अधिकार छ। सुन्दरमणि अधिकारी म्यानेपुलेटिभ अपराधकर्म गर्ने छुपेरूस्तम नटवरलाल हुन्, हैनभने, करोडौं जनता स्रोताहरूले मन पराएको गायिकालाई यसरी गायब बनाएर उनकै गायकीकोकमाईमा ब्रम्हलुट गर्न मिल्छ? यस हिसाबले सुन्दरमणि अधिकारी सामाजिक प्राणी पनि हैनन्। उनी गुप्तवासरूपी अन्धकारको कालो कोठरीमा बसेर विष्णु माझीलाई गीत गवाई, उनको गायकीको पारिस्रमिक रकम अँध्यारोमै गन्दै नियन्त्रण लिने मानव शोषक हुन्।
माझी र अधिकारीको मनोबैज्ञानिक विश्लेषण (साईकोआनालिसिस) गरिनु जरूरी छ। यदि यस्तो हो भने गायिका माझीलाई बन्धकी र गुमनाम बनाउने धुर्त सुन्दरमणि अधिकारीलाई प्रहरी हिरासतमा लिएर मानवाधिकार आयोगले सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनु जरूरी छ।
ब्रिटिनी स्पीयर्सको दुखान्त
यता, अमेरिकी पप गायिका ब्रिटिनी स्पीयर्स सन् १९८१ मा जन्मिएकी हुन्। उनको प्रतिभा, लोकप्रियता र दुर्व्यसनीबाट लथालिंग हुँदै गरेको निजी जीवनको बृतान्त अमेरिकी र विश्वभरकै संचार माध्यमहरूले छरपष्ट पार्दै आएकाछन्। यि दुई गायिकामा फरक के छ भने विष्णु माझी गुमनाम भएर चाँसो र चिन्ताको विषय बनिन् भने ब्रिटिनी स्पीयर्सको दुखान्त जीवन यात्राको उतार-चढ़ावको कारण उनका फ्यानहरू चकित र चिन्तित बन्न पुगेकाछन्।
गायिका ब्रिटिनी स्पीयर्स विगत ११ वर्षदेखि आफ्नै दुर्व्यसनीको खराब लतले गर्दा आफ्नो बाबा जेमी स्पियर्स र वकिलको अभिभावकत्व र सुपरिवेक्षण (Conservatorship) मा जीवन अगाडि बढाउनु परेको छ भने उनका दुई छोराहरू सिन र जेडेन उनका पूर्व पति केभिन फेडरलेनको ७० प्रतिशत हेरचाह अधिकार (custody) मा छन्। गायिका ब्रिटिनी सन् २००६ देखि यता पटक पटक ड्रग दुर्व्यसनी लतको कारण रिहाबमा जाने गरेकीछिन्। यस्तो अवस्थामा अमेरिकी कानूनले उनका ससाना बालक छोराहरूलाई साथमा रहन दिने कुरै भएन। उनको अस्थिर (unstable) अवस्थिती र निरन्तर दुर्ब्यसनीकै कारण उनको गायकीबाट आउने आयस्रोत पनि आफ्नो बाबु र वकिलहरूको तजबिजमा व्यवस्थापन गर्न सन् २००८ मै न्यायालयले नै आदेश दिएको हो। अहिले उनका प्रसंशक फ्यानहरूले #FreeBritney अभियान चलाएका छन्।
गायिका ब्रिटिनी स्पीयर्सबारे थप जानकारीको निम्ति यो लिंकमा जानुहोस:
महिला शोषणको नयाँ रूप:
विश्वका २ करोड ९० लाख महिला आधुनिक दासताको मारमा
वाल्क फ्रीको सन् २०२० को रिपोर्ट अनुसार विश्वमा २ करोड ९० लाख (२९ मिलियन) महिलाहरू आधुनिक दासता (Modern slavery) को मारमा रहेको जनाईएकोछ। रिपोर्टमा विश्वका हरेक १३० महिलामा १ जना महिला आधुनिक दासताको जंजालमा फँसेको जनाईएकोछ। रिपोर्टमा महिलाले भोग्ने आधुनिक दासतामा यौन हिंशा (force sexual exploitation), जबर्जस्ती बिबाह (forced marriage), श्रम शोषण (forced labor) र राज्य संरक्षित श्रम शोषण (state imposed forced labor) पर्दछन् भनिएकोछ।
उक्त रिपोर्ट तलको लिंकमा पढ्नुहोस्: